बुहारी पत्रकारिता —डा. रामचन्द्र लामिछाने – Mid Nepal News - मध्य नेपाल खबर - Mid Nepal News - मध्य नेपाल खबर
बुहारी पत्रकारिता —डा. रामचन्द्र लामिछाने
, १९ पुष २०७४, बुधबार ०६:३५
योग्यता, क्षमता, दक्षता, इमान्दारिता, जिम्मेवारी र जवाफदेहीका दृष्टिकोणले महिलाहरु पुरुषहरु भन्दा हजारौ गुणा अगाडि हुन्छन् । तर परंपरागत समाजीक संस्कार, राजनीतिक मान्यता र औपचारीक कानूनी प्रावधाहरुले गर्दा महिला भुमिकालाई पुरुष सत्तात्मक सोचले नियन्त्रण गरिरहेको छ ।
पितृसत्तात्मक सोचले नियन्त्रण गरेकै कारण हाम्रो समाजमा रवाफ जमाइरहेका छन्, अलिखित कानूनहरुले । त्यसैले गर्दा सामाजिक मूल्य, मान्यता, परंपरा र संस्कारहरु अत्यन्तै विभेपुर्ण, अन्यायी र अत्याचारी छन् ।
यी विभेदपूर्ण, अन्यायी र अत्याचारी परंपराका रक्षक भने महिला र पुरुष दुवै हुन् । देशको औपचारीक कानून (सम्वैधानिक एवम् कानूनी अधिकार) तुलनात्मक रुपमा समावेशी र समतामुलक भए पनि कार्यान्वयनको अभावमा तिनले सकारात्मक परिणाम दिन सकेका छैनन् ।
कतिपय अवस्थामा भने कार्यान्वयन भएर पनि सम्मानजनक र अर्थपूर्ण परिणाम दिन सकेको देखिदैन । त्यसैले ब्यापक कानूनी परिवर्तन भए पनि ती औपचारीकता पूरा गर्ने कागजको खोस्टोमा संकुचित बनिरहेका छन् । र, महिला कुनै पनि सभाको कोरम पु¥याउने पात्र मात्रै बनिरहेका छन् ।
हालै सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा ४१ प्रतिशत महिला जनप्रतिनिधिहरु निर्वाचित भए । सदियौदेखि निरन्तर विभेदमा पारिएका १९ प्रतिशत दलित महिलाहरु औपचारीक नेतृत्वमा पुग्न सफल भएका छन् । यसरी हेर्दा यो निकै सकारात्मक रुपान्तरण हो ।
तर के यस प्रकारको औपचारीक सहभागीताले मात्रै सदियौदेखि जरा गाडेर वसेका परमपरागत मूल्य र मान्यताहरुलाई निमिट्यान्न पारेर एउटा समतामुलक समावेशी समाजको आधारशीला तयार पार्न सक्ला ? संविधान, ऐन कानून र नीतिनियमहरुमा लेखिए झै नेपाली महिलाहरुको जीवनमा आमुल सकारात्मक रुपान्तरण आउला ?
के हाम्रा सबै जनप्रतिनिधीहरुले आफ्ना प्रमुख एजेण्डा समता मुलक समाजको निर्माण हो भनेर बनाउलान् ? नेपालको राजनीतिमा यी सदैव उपेक्षा गरिएका अनुत्तरीत प्रश्न हुन ।
अहिलेको विकास र समृद्धिका कार्यक्रम र नारा हेर्दा केवल भौतिक विकास, पूर्वाधार निर्माण, स्मार्ट सिटी नै सबैका मूल एजेण्डा हुन कि झैं लाग्छ । सदियौदेखि नेपाली समाजलाइ विभेद, अन्याय र शोषणको चक्रव्यूहुमा जकडेर राखेको वाल विवाह, दाइजो, वोक्सी, छाउपडी, जातीय छुवाछुत, महिला वेचविखन आदि जस्ता समस्याहरुको समाधान तर्फ धेरैको ध्यान गएको देखिदैन । सबैले वुझ्न पर्ने यथार्थ के हो भने, जव सम्म सबै जनता कानूनी तथा समाजीक मान्यताका दृष्टिकोणमा वरावर हुदैनन् तवसम्म कुनै पनि प्रकारका भौतिक विकासले देश र समाज विकसित हुन सक्दैन ।
नेपालको संविधान २०७२ अनुसार कानूनी रुपमा सबैका अधिकार समान छन तर के अब समाजवाट विभेद अन्त हुन्छन् त ? नेपाली समाजमा कानूनी रुपमा भन्दा वढी र शक्तिशाली समाजीक मूल्य र मान्यतामा आधारीत विभेदहरु छन । यिनको निराकरण कानून, नीति नियमहरुको निर्माण र कार्यान्वयनले मात्रै हुन सक्दैन ।
उदाहरणको लागि जातीय छुवाछुत यदि कानून वनाएर अन्त हुन्थ्यो भने पाँच दशक भन्दा अघि बनेको मुलुकी ऐनले त्यसलाई दण्डनीय बनाएको थियो तर आज यतिका वर्ष सम्म पनि समस्या ज्यूका त्यूँ छ ।
त्यसकारण समाजलाई छिटो रुपान्तरण कसरी गर्न सकिन्छ ? यो महत्वपूर्ण सवाल हो । यसकै जगमा उभिएर वनेका नीति, कार्यक्रम तथा ऐन कानूनहरुले मात्रै समाज रुपान्तरण हुन सक्दछ ।
नेपालको सन्दर्भमा महिलाहरुको लागि विकास भनेको आफ्नो वारेमा स्वतन्त्र भएर निर्णय गर्न सक्ने, आत्मनिर्भर भएर वाँच्न सक्ने, सबैसँग पहिचान र सहअस्तित्वको आधारमा व्यवहार गर्न सक्ने हो नकि कसैकी श्रीमती, वुहारी, आमाको विशेषणवाट मात्र परिचित हुने हो ।
त्यसैगरि दलितको लागि विकास भनेको आत्मसम्मान, पहिचान, नाम, थर, पेशाको सम्मान सहित समाजमा भूमिका निर्वाह गर्न सक्नु हो । आत्मसम्मान, स्वतन्त्रता एवम पहिचान सहित सबैको भूमिकाको ग्यारेन्टी नै विकासको पूर्वशर्त हो । त्यसपछि मात्रै विकासमा सवैको सहभागिता हुन सक्दछ र विकासले गति लिन्छ ।
के यसको लागि हाम्रो समाज तयार छ ? बढो दुखका साथ भन्नु पर्दछ, समाज त्यसको लागि तयार छैन । अहिले पनि देशमा जातीय छुवाछुतको नाममा दर्जनौ गैरकानूनी हत्या हुन्छ । पिडितले न्याय पाउदैन । वोक्सी आरोप र दाइजो नल्याएको आधारमा महिलालाई दिउसै गुहुमुत खुवाउन बाध्य पारिन्छ र डढाएर मारिन्छ । तर पिडितले न्याय पाउदैन ।
छाउपडी गोठमा वस्दा असुरक्षाले अकारण आफ्नै आमा, छोरी र बुहारीको ज्यान जान्छ । समाज र राज्य यस्तो जघन्य रोगको निराकरणको कारण खोज्दैन । सरकार र ठूला राजनीतिक पार्टीहरु संसदमा कानून पारित गरेर वस्छन र गैर सरकारी संस्थाहरु कानून निर्माणको लागि वहस तथा पैरवी गरेर करोडौ रुपैयाँ उडाइरहेछन् ।
वास्तवमा यी कुराहरु चेतनासँग सम्वन्धित छन । जवसम्म जनताको चेतनास्तरमा वृद्धि गरेर वैज्ञानीक चेतना अभिवृद्धि गरिदैन, हजारौ लाखौ कानून निर्माण गरे पनि केही हुनेवाला छैन । वरु कानूनको सहारामा अत्याचार र भ्रष्टचारमात्रै मौलाउने वातावरण निर्माण हुन्छ ।
सहि अर्थमा नेपाली समाजको सकारात्मक रुपान्तरण गर्नेहो भने प्रत्येक व्यक्तिको चेतनामा अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ । चेतना जागरण गराउने माध्यम भनेका शिक्षालयहरु हुन ।
त्यसकारण सबै शिक्षालयहरुमा नेपाली समाजको समाजीक, भौगोलीक, व्यवशायिक र पारिस्थितीकिय विविधतालाई पहिचान गराउने वैज्ञानीक दृष्टिकोणमा आधारीत शिक्षा अनिवार्य हुनु पर्दछ । त्यस दृष्टिकोणले हेर्दा अहिले पढाइ भइरहेको नर्सरीदेखि स्नाकोत्तर सम्मको पाठयक्रममा आमुल परिवर्तन गर्न जरुरी छ । के हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व त्यसको लागि तयार होला ?
त्यसै गरी शिक्षालय नगएकाहरुको जनसँख्या निकै ठूलो छ । केन्द्रिय तथ्याँक विभागका अनुसार ३५ प्रतिशत जनता यस वर्गमा छन । जवसम्म यो वर्गको चेतना अभिवृद्धि हुदैन तवसम्म कुनै पनि रुपान्तरणका प्रयासहरु सफल हुदैनन ।
के हाम्रो सरकार, राजनीतिक पार्टीहरु र कर्मचारीतन्त्र यस वर्गको चेतना अभिवृद्धि गर्ने नीति तथा कार्यक्रम तय गर्न तयार होला ? भरखरै सम्मन्न प्रादेशीक र संघीय निर्वाचनमा मतदाता शिक्षाको लागि निर्वाचन आयोगले गरेको कार्यक्रम हेर्दा जनताको जनचेतना वृद्धि गर्ने कुरामा यहाँका नीति निर्मातामा कुनै चासो छ जस्तो लाग्दैन ।
निराक्षर जनताको लागि प्रचार सामग्री छपाएर रकम दुरुपयोग गर्ने आयोगको नियत जस्तै सवैको चाल पनि त्यस्तै भयो भने देशले गति लिन कुनै हालतमा सक्दैन ।
विशेषतः समाजीक कुप्रथाले जकडीएको समाजले आफ्नै भलो कसरी हुन्छ भन्ने कुराको हेक्का राख्न सक्दैन । त्यस्तो समाजको शशक्तिकरण सहभागीतामुलक अनौपचारीक खालका विशेष कार्यक्रमहरु मार्फत गर्न सकिन्छ ।
त्यसैगरी शिक्षित तर शिक्षालयहरु छोडिसकेका जनताको लागि प्रविधी र सीपको प्रयोग गरेर अत्यधिक उत्पादन वढाउन चेतना अभिवृद्धि गर्ने खालका नीति तथा कार्यक्रमहरु आवश्यक पर्दछ ।
यस सन्दर्भमा सरकार तथा विकासे निकायहरुले स्थानीय जनताको सहभागीता सहित चेतना अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ ।
नेपालमा सामाजीक कुरीतिको मारमा पर्ने सवै भन्दा ठुलो जनसँख्या बुहारीहरुको रहेको छ । पारिवारिक, सामाजिक, साँस्कृतिक रुपमा बुहारीहरु सबै प्रकारका विभेदवाट देशै भरी प्रताडित रहेका छन् भने तराइ क्षेत्रमा दाइजो, भु्रण हत्या, नागरीकता, सम्पत्ति माथीको अधिकार आदिजस्ता समस्याहरुवाट वुहारीहरु सदियौदेखि प्रताडित छन ।
ठूलो जनसँख्यामा रहेका वुहारीहरुलाई शसक्तिकरण गर्न सकेमा निकै हद सम्म कुरितिहरुको अन्त गर्न सकिन्छ । वुहारीहरुकै सहभागीतामा स्वयम वुहारीहरुका सवाल, समस्या र अवसरहरुलाई जस्ताको तस्तै स्थानीय सामुदायिक रेडियोहरु मार्फत केन्द्रिय सञ्चार माध्यमहरु समक्ष प्रस्तुत गराएर विभेदका मुद्धाप्रति घर परिवारदेखि केन्द्रिय नेतृत्वहरुलाई ध्यानाकर्षण गराउन सकेमा समता मुलक समाजको चेतना अभिवृद्धि हुन्छ ।
यसरी चेतना अभिवृद्धि गर्न सकेमा सबै तहमा समानता र सहअस्तित्वको आधार विकास हुन्छ । यसका लागि वुहारीहरुको आवाज वाहिर ल्याउन आवश्यक हुन्छ । यदि वुहारीहरुलाई पत्रकारीताको सिप सिकाएर र स्थानीय सामुदायिक रेडियोहरु तथा सञ्चार माध्यामसँग सहकार्य गर्ने वातावरण निर्माण गरियो भने वुहारीहरुले एक प्रकारको शक्ति प्राप्त गर्दछन ।
सञ्चार र सञ्चारकर्मीहरुमा विभेदलाई समानतामा रुपान्तरण गर्ने शक्ति हुन्छ र यदि यो शक्ति सबै भन्दा पिडित वर्गलाइ दिइयो भने विभेदलाई समानतामा रुपान्तरण गर्ने अचुक अस्त्र वन्न सक्छ ।
तालिम प्राप्त पत्रकार वुहारीहरुले स्थानीय स्तरमा भएका साना ठुला सवैखाले घटनाहरु सामुदायिक रेडियो, स्थानीय सञ्चार माध्याम र सामुदायिक सूचना नेटवर्कसम्म रिपोर्टिंग गर्न सक्नेछन । यसरी वुहारी पत्रकारहरुले गरेका रिपोर्टिंगलाई उच्च महत्वका साथ सामुदायिक रेडियोहरु, सिआइएन , अनलाइन पत्रिकाहरु एवम् राष्ट्रिय स्तरका दैनिक पत्रिका एवम् सञ्चार माध्यमहरुले प्रसारण गरेमा पिडितका सवालहरुमा सरोकारवाला सबैको ध्यान आकृष्ट हुन सक्छ । वुहारीहरुको पहिचान सञ्चारकर्मीको रुपमा स्थापित हुन सक्दछन् ।
जव पत्रकारको पहिचानमा वुहारीहरुले शक्ति आर्जन गर्दछन् तव मात्र दाइजो, नागरीकता, सम्पत्तिमाथिको अधिकार, भु्रण हत्या, घरेलु हिंसा जस्ता समस्याहरुलाई स्थानीय स्तरवाट निमिटयान्न पार्न सकिन्छ । गाउँ गाउँमा वुहारीहरुलाई पत्रकारको रुपमा प्रशिक्षित गरेर रिपोटिंगको लागि योग्य वनाउन सकियो भने सामाजिक कुरितिको आडमा हुने विभेद जन्य व्यवहारहरुमा आमुल परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ भने विभेदमा संलग्न हुने जो सुकैलाई पनि कानुनी एवम् समाजिक कार्वाहीको दायरामा ल्याएर दण्डहिनताको अन्त गर्न सकिन्छ ।
पत्रकारीताले वुहारीहरुको मात्रै हित गर्ने नभई सम्पुर्ण महिला पुरुष एवम समग्र समाजको सकारात्मक रुपान्तरण महत्वपूर्ण योगदान दिन सक्दछ । समाज निर्माणको लागि वर्षौ देखि गुम्सीएर रहेका महिलाहरुका भावना तथा चाहनाहरुको सहज तवरले प्रष्फुटन अवसर प्राप्त हुन्छ । घरदेखि केन्द्रसम्म महिलाहरुको सिर्जशीलता र रचनात्मक भूमिकाको सदुयोग हुन जान्छ । तत्पश्चात् महिलाहरुलाई सहयोगी र सहायकको रुपमा मात्र हेर्ने पुरुषहरुको सोचमा पनि व्यापक परिवर्तन आएर सहकार्यको वातावरण निर्माण हुन्छ । सहअस्तित्वमा आधारीत समावेशी समाजको आधारशीला पनि निर्माण हुन्छ ।
(लेखक, सामुदायिक रेडियो प्रसारण संघ, एकोरावका कार्यकारी निर्देशक हुन् ।)